Umuthi 'Imupret ". Iziyalezo izingane: Isikali, imizila yokuphathwa
German immunomodulatory izidakamizwa "Imupret" yokusetshenziswa okuyinto zizonikezwa ukuqhubekisela phambili ukunakwa kwakho, iqukethe enkabeni yalo izinto Lokudabuka zemifino. Uyakwazi kuthinte izivikeli mzimba njengomuntu omdala futhi ingane, ayezosebenza njengabaqondisi isilinganiso izifo, kanye kakhulu ukusheshisa le nqubo zokuphulukisa ngokusebenza lihambisana namanye izidakamizwa.
Khipha ifomu kanye nokwakheka "Imupret" izidakamizwa
Ukukhululwa isihloko kusho ngesimo amaphilisi ushukela-camera phama amabhamuza noma amaconsi temlomo, zahlanganiswa ngo izitsha eziyisikhombisa efanelekayo ezenziwe ngengilazi amnyama. Ukuba khona nje ewuketshezi zomuthi, ngokuvumelana ongoti, futhi abazali of seziguli ezisencane, kusiza kakhulu ukusetshenziswa kwayo, ikakhulukazi ekwelapheni izinsana.
Njengoba izidakamizwa sinamathela 'Imupret "Umhlahlandlela, iqukethe izinto ezikhishwe amakhambi eziyisikhombisa: lwebhece impande, horsetail utshani, amaqabunga ziyadliwa, chamomile izimbali, oki amagxolo Yarrow kanye dandelion. Kwesinye dragees ungeze excipients ngesimo monohydrate glucose, lactose kanye sucrose.
Kanjani lesi sidakamizwa "Imupret": isitatimende
Ezinganeni kufanele uzame ukukhetha ephephile futhi ngesikhathi imithi efanayo ezinikeza. Imiyalelo ku-ejenti phambi kwethu kusho ukuthi sinamandla afanayo nemiphumela eqeda ukuvuvukala, elwa namagciwane, eqeda ukuvuvukala kanye immunomodulatory. Lokhu kungenxa yokuthi i-izinto eziqukethwe ukulungiselela izifo ezithathelwanayo ukuthuthukisa ikhono amaseli ukulungisa umonakalo zamakhemikhali amakhefu ku molecule e-DNA (kwezokwelapha, lokhu impahla libizwa ukulungiswa). Ngaphezu kwalokho, basuke ocushiwe futhi phagocytosis - ikhono kwamangqamuzana egazi ukuncela ejenti ethize ezithathelwanayo.
Ngenxa izakhiwo kushiwo, isicelo amaconsi noma amaphilisi "Imupret" (izimpendulo Kuzoxoxwa ngani esihlokweni) kunciphisa kuphele isikhathi sibi kakhulu lesi sifo, futhi uma izindlela kuthathwe ukuvimbela, ukunciphisa izinga lokuhlasela kwesifo nobukhali izifo ezithathelwanayo.
Lo mshini wezenzo zomuthi kungenxa izakhiwo ezichazwe izingxenye yemifino kufakwe ngezithako zawo. Bona umphelelisi nomunye, ukuze kuncishiswe ukuvuvukala ukunciphisa ukuvuvukala mucosa umgudu. Ngaphezu kwalokho, bobabili droplet futhi dragees esigubuzele ifa izakhiwo, esiza ukwehlisa ukucasuka mucosal consequently ukuqeda, futhi eminye ekuqedeni ukukhwehlela nonproductive.
Kwezinye izimo, amathonsi noma amaphilisi "Imupret" izingane (umyalelo)
Amaconsi futhi dragees ngokuyinhloko asetshenziswa kule ukwelashwa eyinkimbinkimbi oyingozi noma ezingamahlalakhona yomoya isifo (namathansela, pharyngitis, laryngitis), ngaphandle kokubheka isifo omsakazo.
Ngaphezu kwalokho, lo izidakamizwa echazwe isetshenziswa njenge-agent prophylactic ukuvimbela Ukuphinda ngesikhathi pathologies njalo elingenhla ipheshana zokuphefumula, kanye agweme ukubaphathisa kwamagciwane kokunye kubhubhane.
Ubani akufanele bathathe amathonsi kanye amaphilisi "Imupret"? Izingane kanye nabantu abadala abangenayo ezwela anda ukuze eziyingxenye izindlela wathi izidakamizwa, "Bionorica" isidakamizwa ngokuqinile iphephile. Komzimba kungcono ukuthola izidakamizwa ezahlukene. Phela, ngo abantu iguliswa nezitshalo Compositae umndeni, ukusetshenziswa kwezidakamizwa lihambisana izindlela kuhlanganise chamomile izimbali, kungadala basabele kahle.
Ngaphezu kwalokho, ithuluzi okuthiwa akukashicilelwa ukuba abesifazane phakathi nokukhulelwa kanye lactation.
Uyazi ukuthi kungani nodokotela bezingane ngokuvamile linqume Imupret zeziguli zabo '? Ezinganeni manje sikhululiwe eziningi izidakamizwa, kodwa akuwona wonke ehlangana kahle nezinye izidakamizwa elwa namagciwane futhi elwa namagciwane. Enye into - sisuke sicabanga izindlela. Inkampani "Bionorica" mkhiqizo nje esetshenziswa ekwelashweni eziyinkimbinkimbi, futhi lokho ikakhulukazi abazali bajabule ayivamile ukubangela engemihle. Nokho, ngezinye izikhathi isinghonghoyilo sakho nanje wamukelwa. Njengomthetho, abantu basabele ngendlela embi ngenxa yesihluku ngabanye futhi wabonisa ubuhlungu besisu, isicanucanu futhi ngezinye izikhathi nokuhlanza. Ezinye iziguli zingase zivele nokungezwani komzimba nezinto ezifana urticaria, ukulunywa futhi ukuvuvukala ingaphakathi acinene. Uma uhlangabezana nanoma iziphi ukusabela kufanele ayeke ukuthatha izidakamizwa futhi uxhumane wabantwana iseluleko.
Izici reception lehla "Imupret"
Njengoba izidakamizwa sinamathela 'Imupret "imfundo, izingane leli thuluzi Kungcono ukuthenga ngesimo amathonsi. Bottle ifakwe pipette ukhululekile, okuyinto kalula ngiyolinganisa umthamo enqunywe udokotela wakho. By the way, izingane imithi kungaba ukungezwa juice noma itiye, ngenkathi abadala kunconywa ukuba baphuze undiluted.
Njengoba Kunconywa ukuthatha izidakamizwa "Imupret" yokuzenzela? Ezinganeni abaneminyaka engama 6 kanye nabantu abadala kanye oyingozi noma ezingamahlalakhona ukuvuvukala umgudu isifo, umthamo kuyinto 15 amathonsi izikhathi 6 ngosuku. Izingane kusuka onyakeni owodwa kuya eminyakeni 6 ubudala umthamo ngokuvamile bengekho ngaphezu kwama-10 amathonsi, imithi udinga ukuthatha 5 noma 6 izikhathi ngosuku. Ngonyaka ezingaphansi kuka imvuthu of Pediatrics incoma akunika 5 amathonsi ikumodi efanayo.
Phela, lo ukulungiselela isiphuzo zokudla. Ngaphambi ukusetshenziswa, udinga ukukhumbula nithintithe ibhodlela. Uma abazali banikeze ubhontshisi ingane jelly (kuboniswe leli fomu zomuthi iziguli abaneminyaka engama 6), kufanele sikhumbule ukuthi imithi ezokuhlafunwa, futhi kugwinywe lonke, ukuphuza uketshezi oluningi.
Njengoba waveza ezifakwe umkhiqizo "Imupret 'ukufundisa izingane yokwelapha efomini acute lesi sifo ihlala okungenani ngesonto, futhi ezingalapheki - kweemveke eziyisithupha. Uma isithombe emtholampilo ngcono, imvamisa nokushintsha kokudla nokufakwa sehliselwe kathathu ngosuku, ngaphandle kokushintsha yesikhathi esisodwa nokushintsha kokudla nokufakwa.
Okubalulekile! Khumbula ukuthi kokuvula ibhodlela zingagcinwa akukho kuka izinyanga eziyisithupha.
Umuthi kungenzeka ewusizo "Imupret"
Ngokuvamile, izidakamizwa echazwe isetshenziswa eyinkimbinkimbi izinyathelo zokwelapha noma njengoba prophylactic. emizimbeni Wezingane Lesi sifo siphatha kakhulu emagciwaneni, ngakho-ke kudingeka ivikelwe. umsizi esihle kule ndaba kuyoba amaconsi futhi amaphilisi "Imupret". Ukufundiswa izingane, odokotela yangempela futhi abazali bathi lokhu izidakamizwa eliphezulu imikhiqizo yemvelo akuzona kuphela kakhulu esebenza kahle kodwa futhi ephephile ngisho nokusebenzisa isikhathi eside.
Isihluthulelo lokhu - ngokuqinile ulandele umthamo kanye yokuvuma imithetho musa phela yokwelapha, ngisho noma ekwenteni ncono isimo somntwana kutholwa. Kuphela uze uwaqede kuzosiza ukulungisa yi futhi akwenze ize kungenzeka ukuphinda.
Izidakamizwa nge nomphumela ofanayo
Uma ngasizathu simbe ungenalo nisondelé lezi amathonsi (nakuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Imupret" izingane libuyekeza ngokuvamile kuphela positive), angase indawo izidakamizwa kanye nomphumela ofanayo. Nokho, ingabe kufanele yenziwe yini kuphela ngemva ubonane nodokotela, t. Ukuze., Futhi izingxenye kwemithi emisha kanye umthelela wabo isiguli ziyahlukahluka kakhulu.
Ngakho, amaconsi ekhona "Imupret" nozakwabo - kuba izidakamizwa, futhi equkethe ukubunjwa kanye izithako herbal yayo usizo yokwelapha eyinkimbinkimbi izifo oyingozi futhi ezingalapheki umgudu wokuphefumula. Nazi ezinye zazo:
Drops "Sinupret" (impande gentian, primrose, izimbali elderberry futhi Verbena), unekhono ukususa ukuvuvukala imiBhalo acinene, ulungise liquefaction nokuhlukaniswa we uketshezi kule sinuses maxillary futhi sithuthukise amasosha omzimba.
Drop futhi isiraphu "Bronchipret" (ingxenye Thyme imbiza kanye amaqabunga ivy), has a action expectorant evelele, eqeda ukuvuvukala kanye sekretoliticheskoe.
I isiraphu eyehlela "Immunal" (Echinacea akhiphe) asetshenziswa ukuze sikhuthaze ukubuyekeza mzimba, kanye agent elwa namagciwane ngoba izifo Umkhuhlane futhi herpes.
Ekugcineni abanye ulwazi mayelana Izibuyekezo
Iyatholakala ukuze amathonsi "Imupret" imfundo (izingane kanye nabantu abadala-ke kuyafana, ngaphandle imithamo) likuchaza ngokuningiliziwe umphumela izidakamizwa wathi, kodwa imicabango yabantu kubazali izingane ngeseluleko, odokotela bathatha ama kuye ngesikhathi ekuguleni kwakhe, u-ke, kubonakala sengathi ukuba ekholisa ngokwengeziwe.
Kumelwe uthi ngokucacile ukuthi iningi lalezi Izibuyekezo waqinisekisa nokwethenjelwa umphumela okusheshayo zomuthi. Nokho, abanye omama esekhala lubonakale utshwala ukunambitheka amathonsi, kodwa ngoba ukungezwa juice noma itiye, kusobala ukuthi le nkinga akuyona njengoba sibi. ezithakazelisayo Okuningi ukwazi ukuthi iconsi ngakho okuhle ngempela "Imupret". Ezinganeni (izibuyekezo ukuthi abazali nodokotela bezingane kukhona ngazwilinye lolu daba) iyithuluzi elihle kakhulu. Ngokusho kochwepheshe, ngemuva kokuthatha izidakamizwa iziguli abasha alulame ngokushesha futhi babe ngenxa yezinkinga ngemva izifo futhi enempilo izingane ingozi yokuba ngesikhathi ekwindla kanye Umkhuhlane ebusika kubhubhane kanye nezifo sibi zokuphefumula ancipha kakhulu. Izibuyekezo lomama wanelisekile ngokuvamile ukuqinisekisa izitatimende zodokotela. Kodwa ukuze unike izidakamizwa, naphezu zinhlobo zayo Ukwakheka nokuvikeleka cishe ngokuphelele (uma iguliswa izithako ezisebenzayo) may kuphela wezingane. Ungazami zithokozise!
Izidakamizwa Antifungal "Triderm": Yokusetshenziswa
Kusho "akvamaris" (spray). imfundo
Indlela ukulungiselela isixazululo ukugeza ekhaleni?
"Dzhevtana" (cabazitaxel): the nozakwabo intengo. Njengoba ukuthenga a "Dzhevtana"
Kusho "Front Line" (spray)
I esiphundu kakhulu futhi kulula ikhekhe amajingijolo Puff khekhe. Zonke izimfihlo futhi ubuqili ukupheka
Ventriculomegaly-fetus - kuyini?
Petrinos Aparts 3 * (Rethymnon) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa